Rindramalala Clara RAKOTOZAFINDRABE
“Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, izay efa nirahinao” - Jao. 17:3.
Tsy misy olona afaka hikaroka ny Soratra Masina amin’ny fanahin’i Kristy ka tsy hahazo valisoa. Rehefa maniry ny hampianarina tahaka ny zazakely ny olona, rehefa milefitra tanteraka eo amin’Andriamanitra izy, dia hahita ny fahamarinana ao amin’ny teniny. Raha mba mety mankato ny olona, dia ho takany ny drafitry ny fanjakan’Andriamanitra, hisokatra hozahany ireo efitrefitra feno fahasoavana sy voninahitra any amin’izao tontolo izao any an-danitra. Ho tonga hafa dia hafa noho izao toetrany ankehitriny izao ny olombelona satria hanandratra azy ny fikatsahana ny fahamarinana. Ny zava-miafin’ny fanavotana sy i Kristy tonga nofo ary ny fanati-panorenana nataony dia tsy hanjavozavo tahaka ny ankehitriny intsony. Tsy hoe hihazava fotsiny ireny, fa hankasitrahany fatratra koa.
Tao amin’ny vavaka nataony tamin’ny Ray dia nanome lesona ho an’izao tontolo izao izay tokony ho voasokitra ao an-tsaina sy ao amin’ny fanahy i Kristy. “Ary izao no fiainana mandrakizay, hoy Izy, dia ny mahafantatra anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, izay efa nirahinao” - Jao. 17:3. Io no fanabeazana marina. Manome hery izany. Ny fahalalana an’Andriamanitra sy Jesôsy Kristy Izay nirahiny raha mandalo amin’ny fanandramana nataon’ny tena mihitsy, dia manova ny olona hanam-pitoviana amin’Andriamanitra. Manome ny olona fahaizana mifehy tena izany ka mitondra ny fironana sy ny filan’ny nofo ambany ho eo amin’ny fifehezan’ny herin-tsaina ambony kokoa. Mahatonga ny manana azy ho zanak’Andriamanitra sy mpandova ny lanitra izany. Mampiray azy amin’ny sain’Ilay tsy voafetra izany ka mamokatra ho azy ny harena eran’izao rehetra izao.
Io no fahalalana azo avy amin’ny fandalinana ny tenin’Andriamanitra. Ary io harena io dia mety ho hitan’ny fanahy tsirairay izay manaiky hahafoy ny zavatra rehetra hahazoana azy. – HF, t. 871-3.